Wadaagis la leh Ilaah, Kaniisadda Dunida ee Ilaah Switzerland (WKG)
Laba Masiixiyiin ayaa midba midka kale kala hadlay kaniisadahooda. Intii ay wada-hadaladu socday, waxay isbarbar dhig ku sameeyeen guulaha ugu waaweyn ee ay ka gaareen bulshooyinka ay ka kala dhasheen sanadkii la soo dhaafay. Mid ka mid ah ragga ayaa yiri: "Waxaan labanlaabnay baaxadda baarkinkayaga baarkinka". Kii kale wuxuu ku jawaabay: "Waxaan ku rakibay laydh cusub hoolka kaniisadda". Annaguna Masiixiyiin ahaan waxaan si fudud uga dhex geli karnaa sameynta waxyaabo aan aaminsanahay inaynu Ilaahay sameyneyno oo aan waqti yar u qabno Ilaah.
Waxaan ka mashquuli karnaa himiladeenna iyo dhinacyada jidheed ee adeegga kaniisaddayada Ka fikir aad u muhiim ah (in kasta oo ay lagama maarmaan tahay) oo aan haysanno wax yar, haddii ay jiraan, wakhti u haray xidhiidhka Ilaah. Markii aan mashquul ku nahay howlihii culus ee Ilaah, waxaan si fudud u ilaawi karnaa wuxuu Ciise yiri: “Waa idiin hoog, culimmo iyo Farrisiin yahay, labawejiilayaal oo meeltobnaadyada ka bixiya mint, dill iyo abuurka jidadka badan oo ka tagaya waxa ugu muhiimsan sharciga, xaq, naxariis iyo iimaan! Laakiin qofku waa inuu sidan sameeyaa oo uusan ka tegin taas » (Matayos 23,23).
Culimadii iyo Farrisiintii waxay ku noolaayeen heerar qaas ah oo adag oo axdigii hore. Mararka qaar waan akhrinaa oo waxaan ku kaftamnaa saxnaanta khaldan ee dadkaan, laakiin Ciise ma uusan jees jeesin. Wuxuu u sheegay inay sameeyaan wixii ay dowladda federaalka ka codsatay inay qabtaan.
Ujeedka Ciise wuxuu ahaa in faahfaahinta muuqaal ahaaneed aysan ku filneyn, xitaa kuwa ku hoos nool axdigii hore - wuu canaantay maxaa yeelay waxay iska indhatireen arrimaha qoto dheer ee ruuxiga ah. Masiixiyiin ahaan, waa inaan ku mashquulnaa ganacsiga aabaha. Waa inaan ku deeqnaa deeqsinimadeena. Laakiin dhammaan howlaheena - xitaa nashaadaadyada si toos ah ula xiriira raacitaanka Ciise Masiix - waa inaanaan iska indho tirin sababaha aasaasiga ah ee Ilaah noogu yeedhay.
Ilaah baa naloo yeedhay si aannu isaga u aqoonno. "Laakiin taasi waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan, adiga oo ah Ilaaha keliya ee runta ah iyo kii aad soo dirtay, Ciise Masiix" (Yooxanaa 17,3). Waa suurtagal in lagu mashquulo shaqada Ilaah oo aan iska indhatirno imaatinkiisa. Luukos wuxuu inoo sheegayaa sheekada markuu Ciise booqday guriga Marta iyo Maryan ee ahayd "Maarta waxay ku mashquulsanayd u ​​adeegiddiisa" (Luukos 10,40). Ma jirin wax khalad ah oo ficillada Marta ah, laakiin Maryan waxay go'aansatay inay sameyso waxa ugu muhiimsan - waqti la qaadatid Ciise, is barato oo dhageysatid.
Bulshadu waa waxa ugu muhiimsan ee Eebbe inaga doonayo. Wuxuu doonayaa inaan sifiican isaga baranno oo aan waqti ula wadaagno. Ciise wuxuu ina siiyay tusaale markii uu ka gaabiyey xawaare noloshiisa inuu la joogo aabihiis. Wuxuu ogaa muhiimada ay leedahay wakhtiyada aamusnaanta wuxuuna inta badan buurta keligiis u aado si uu u tukado. Markasta oo aan ku sii weynaato xiriirkeena aan la leenahay Ilaah, ayaa ahmiyad siinta waqtiga aamusnaanta leh ee Ilaah uu sii ahaanayo. Waxaan rajeyneynaa inaan keli ku ahaano isaga. Waxaan aqoonsan nahay baahida loo qabo in la dhageysto isaga si loo helo raaxo iyo hagitaan nolosheena. Waxaan dhawaan la kulmay qof ii sharxay in ay isku daraan wehel firfircoon oo ay Ilaah la tukadaan iyo nashaadaadka jir - iyo in noocan ah ducada noocee ay badali lahayd noloshooda salaadda. Waxay waqti la qaadatay Ilaah iyadoo lugaynaysa - ha ahaato agagaarkeeda ama quruxdeeda deegaanka dabiiciga ah, iyadoo ducaysaneysa markay soconeyso.
Haddii aad ka dhigatid wehelnimada Ilaah mudnaan, dhammaan arrimaha degdegga ah ee noloshaada waxay umuuqdaan inay is daryeelaan. Markaad diirada saarto Eebbe, wuxuu kaa caawiyaa inaad fahamto ahmiyadaha waxkastoo kale. Waxay ku mashquulsan yihiin nashaadaad inay iska daayaan waqti ay kula hadlaan Ilaah iyo waqti ay la qaataan dadka kale la yeelashada Ilaah. Haddii aad si buuxda culeys ugu saareyso, noocee shumaca maahmaahda ah labada dhinacba oo aadan aqoon sida aad wax u sameyso nolosha oo dhan, markaa waxaa laga yaabaa inaad hubiso cuntadaada ruuxiga ah.
Cunnadeena ruuxiga ah
Waxaa laga yaabaa in nala gubto oo aan ruux ahaanna faaruqno maxaa yeelay ma cunno rootiga saxda ah. Nooca rootiga aan ka hadlayo wuxuu gabi ahaanba lagama maarmaan u yahay caafimaadkeena ruuxiga ah iyo badbaadinteena. Rootigani waa roodhida ka sarraysa - runti, waa rooti mucjiso dhab ah! Waa isla rootigii uu Ciise Yuhuudda siiyay qarnigii koowaad. Ciise wuxuu si mucjiso ah cunto u siiyay 5.000 oo qof (Yooxanaa 6,1-15). Wuxuu kaliya ku dul socday biyaha hadana dadkii badnaa waxay dalbadeen calaamad lagu rumeeyo isaga. Waxay u sheegeen Ciise: “Awowayaasheen waxay cidlada ku cuneen cidlada, sida qoran (Sabuurradii 78,24): wuxuu samada ka siiyey kibis ay cunaan " (Yooxanaa 6,31).
Ciise wuxuu ku jawaabay: "Runtii, runtii waxaan idinku leeyahay, Muuse ma ahan kii jannada idinka siiyey, laakiin Aabbahay wuxuu samada idinka siinayaa kibista runta ah. Waayo, tanu waa kibista Ilaah ee samada ka timaada oo dunida nolosha siisa. (Yooxanaa 6,32-33). Markay ka codsadeen Ciise inuu siiyo kibistan, wuxuu ku sharaxay: “Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Oo ku alla kii ii yimaadaa ma gaajoon doono. oo kii i rumaystaa weligiis harraadi maayo. (Yooxanaa 6,35).
Kumaa miiska dusheeda saaraaya? Waa kee meesha laga helo xooggaaga iyo xooggaaga oo dhan? Kumaa macno iyo macno u leh noloshaada? Waqti miyaad ku qaadataa inaad barato rootida nolosha?